Dhagdheer “ Abgaal dhalanteed ayay ku jiraan, Gudoomiyaha Murusadaa leh” - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Dhagdheer “ Abgaal dhalanteed ayay ku jiraan, Gudoomiyaha Murusadaa leh”
Dhagdheer “ Abgaal dhalanteed ayay ku jiraan, Gudoomiyaha Murusadaa leh”
Xildhibaan Xuseen Iidow iyo Senator Dhagdheer oo ay isku hayb ka soo jeedaan Xasan Cali Kheyre ayaa waxa ay ka wadaan magaalada Dhusamareeb barnaamij lagu beegsanayo beesha Abgaal, gaar ahaan beesha Waceysle.
Ma aha kaliya in ay u ololeeynayaan in beesha Murusade qaadato gudoonka Baarlamaanka, balse waxa ay dagaal siyaasadeed iyo mid amni daro ku qaadeen qofkastaa oo ka soo jeeda beesha Abgaal oo ay rajo uga jirto in ay u tartamaan gudoonka Baarlamaanka.
Dhagdheer oo isticmaalaya awooda Xassan Kheyre iyo dhaqaalaha xukuumada ayaa waxa uu bilaabay in uu u hanjabo musharaxiinta beesha Abgaal ee danaynays in ay u tartamaan kursiga gudoomiyaha baarlamaanka. Dhegdheer ayaa qadka teleefanka ugu hanjabay dhowr musharax oo sheegtay in ay danaynayaan tartanka gudoonka Baarlamaanka.
Waxaa nasiib xumo ah in Xasan Cali Kheyre oo itcimaalayo beeshiisa uu dagaal aan gabasho lahaynin uu ku qaado beesha Abgaal una diido in ay u tartanto gudoonka Baarlamaanka Galmudug.
Dhanka kale waxaa iyadana wax lala yaabo noqotay in xildhibaandii iyo waxgaradkii ka soo jeeday beesha Abgaal ay ka aamusan yihiin ficilka uu hogaanka u hayaan Dhagdheer iyo Xasan Kheyre.
Previous articleMaamulka Puntland oo sheegay in uu ku soo wajahanyahay Roob dabayla xoogan wata
Next articleBooliska Kenya ayaa ka hadlay weerarkii alshabaab ee Saakay